बलियो कोलम्बियालाई एसियाली पावरहाउस जापानले कडा चुनौती दिदै, यस्तो छ दुई राष्ट्रको इतिहास ! || सुनौलो नेपाल
बलियो कोलम्बियालाई एसियाली पावरहाउस जापानले कडा चुनौती दिदै, यस्तो छ दुई राष्ट्रको इतिहास !
मस्को (एजेन्सी)विश्वकप फुटबलमा आज समूह चरण अन्र्तगतको पहिलो चरणका अन्तिम खेलहरु हुदैछ । मंगलबार राति समूह ‘एच’ को खेलमा एसियाली पावर हाउसको जापानको सामना गर्दै छ । खेल नेपाली समयअनुसार साँझ ५ः४५ बजेपछि मोर्डोभिया एरिनामा सराङसमा हुनेछ ।
विश्वकपको उपाधि जित्ने योजनामा रहेको कोलम्बिया पहिलो खेलमा जापानलाई निराश पार्दै दोस्रो चरण पुग्ने लक्ष्यलाई सहज बनाउने योजनामा हुनेछ । कोलम्बियासँग हामेस रोड्रिग्वेजको साथै सदावहार स्ट्राइकर राडामेल फल्काओ, जुवान कोर्डाडो डेभिड ओस्पिना र यारी मीनाजस्ता विश्वस्तरको खेलाडीहरूको साथ रहेको छ ।
कोलम्बियाका म्यानजर जोसे पिकरम्यानले टिमले पहिलो खेलमा सफलता हात पार्नेमा विश्वस्त रहेको बताए । तर, कोलम्बियाको विश्वकप छनोट यात्रा भने माध्यम बनेको थियो । कोलम्बिया दक्षिण अमेरिकी छनोटमा चौथो स्थान हात पार्दै विश्वकपमा छनोट हुन सफल भएको थियो । १८ खेलमध्ये कोलम्बियाले ७ खेलमा जित, ६ बराबरी र ५ खेलमा हार बेहोरेको थियो ।
विश्वकप छनोटमा औसत प्रदर्शन गरेको कोलम्बियाले विश्वकप अघिको दुई मैत्रीपूर्ण खेलमा पनि बराबरीमो नतिजा निकालेको थियो । अस्ट्रेलियासँग बराबरी खेलेको कोलम्बियाले इजिप्टसँग पनि गोलरहित बराबरी खेलेको थियो । लगातार दुई खेलमा गोल गर्न नसकेको कोलम्बिया जापानविरुद्धको खेलमा गोलको खडेरी तोड्ने योजनामा हुनेछ ।
कोलम्बियाको अग्रपंक्तिमा हामेस रोड्रिग्वेज र राडामेल फल्काओले सम्हाल्नेछन् । यता, एसियाली पावर हाउस जापान पहिलो खेलमा बलियो कोलम्बियाविरुद्ध मैदानमा उत्रँदा अंक नगुमाउने रणनीतिमा हुनेछ । जापानले कोलम्बियालाई कम्तीमा पनि बराबरीमा रोक्ने लक्ष्यमा हुनेछ । लगातार छैटांैपटक विश्वकप खेल्न लागेको जापानले दोस्रो चरण पार गर्न सकेको छैन ।
यस्तो अवस्थामा जापान पहिलो खेलमा कोलम्बियालाई रोक्दै बाँकी दुई खेलमा जित हात पार्दै नकआउट चरण पुग्ने योजनामा हुनेछ । सन् २००२ मा आफंैले आयोजना गरेको विश्वकपमा पनि जापान प्रि–क्वार्टरफाइनल भन्दा अघि बढ्न सकेन । जापानी प्रशिक्षक आकिरा निसिनोले पुराना र युवा खेलाडी समेटेर सन्तुलित टोली बनाएका छन् ।